China Chrome Ball Ball Manufacturer na Supplier | Lixin
Buru ígwè bọọlụ, makwaara dị ka chrome steel bọọlụ, na-akacha eji Rolling agba bọọlụ na agba ụlọ ọrụ na dị iche iche akpakanamde ngwa. Iburu bọọlụ nchara nwere oke nkenke, oke mma dị elu, isi ike dabara adaba, na nguzogide kachasị mma.
Nkenke biarin, akpakanamde mmiri (brek, n'iru, akara aro), ịnyịnya ígwè, agitators, ngwa, sliders, ngwa njikọ, igwe akụrụngwa, mkpọchi usoro, ebu eriri, skates, itienna, nfuli, castors, n'ihe ngwá, valves.
Otutu Ogo Nnyocha & Njikwa
Anyị eguzobewo usoro ihe eji arụ ọrụ yana akụrụngwa nyocha dị iche iche, gụnyere ngwaọrụ ekweghị ekwe, akụrụngwa gburugburu, ngwaọrụ microscope na ihe ndị ọzọ. Ala nlele sorting, photoelectricity nnyocha na visual nnyocha bụ anyị na-emebu ụzọ ịchịkwa àgwà na hụ na ọ dịghị emerụ bọọlụ asọpụta anyị factory. Ebumnuche anyị bụ inye bọọlụ kacha mma n’ụwa niile.
Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa na-etinye mmepụta na ahịa. Ọ tumadi aku mbubata na mbupụ azụmahịa nke biarin na nkenke nchara bọọlụ. Isi ngwaahịa ndị miri uzo bọl biarin, na tapered ala biarin, na cylindrical ala biarin, na onwe kwado kwado biarin, na agịga ala biarin, na-atụ bọl biarin, chrome ígwè bọl, carbon ígwè bọl, igwe anaghị agba nchara bọl na na . A na-etinye ha maka ụgbọ ala, ọgba tum tum, ngwa ụlọ, ịkwa akwa na igwe eletriki, ngwaọrụ egwuregwu, ngwa eletriki na akụrụngwa ndị ọzọ. A na-ebupụ ha n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka Europe, America, Japan na South Korea. Anyị na-ukwuu tụkwasịrị obi na-akwado site zuru ụwa ọnụ ahịa na anyị kacha mma mma na ezigbo ọrụ.
1, 250kg / nchara mbukota, 4 drum na otu pallet, 78cm * 78cm
2, 10kg / igbe, 100boxes na otu osisi, 92cm * 73cm * 67cm
3, 5kg / polybag, 90 polybags na otu osisi ikpe, 60cm * 80cm * 40cm
4, 25kg / katọn, 40-60cartons / pallet, 92cm * 73cm * 67cm
Mara: Anyị nwekwara ike ibute bọọlụ dịka ihe ị chọrọ si dị.
Mentkwụ Metgwọ Method: T / T, Western Union, Paypal, L / C.
Mbupu & Oge nnyefe
1) Ihe na-erughị 45 Kg: DHL, TNT, FedEx, UPS kwupụtara ga-aka mma
(-7bọchị 4-7 nyefere na adreesị gị)
2) N'etiti 45 ruo 200 Kg: transportationgbọ njem ikuku ga-aka mma
(-14bọchị 5-14 nyefere gị n'ọdụ ụgbọ elu gị)
3) N'ime 200 Kg: transportationgbọ njem ụgbọ mmiri ga-aka mma
(Dị ọnụ ala, ụbọchị 18-45 ruo ọdụ ụgbọ mmiri gị)
Rịba ama: Anyị ga-ahọrọ ibu kachasị mma maka ịchekwa ụgwọ mbupu. E wezụga na anyị na-enye niile mkpa akwụkwọ maka mpaghara gị.
Ọdịdị dị elu
Anyị bụ ndị ọkachamara rụpụta na ahia.
Otutu ụdị bọọlụ bụ ngwaahịa anyị bụ isi, nke nwere uru na mma na ọnụahịa.
Mba ọ bụla gburugburu ụwa ga-abụ ndị ahịa anyị.
Ozugbo na mbupu dị iche iche hụ na bọọlụ ruru gị ASAP.
Ọrụ 24 awa site na nyocha ruo mgbe ọrụ gachara.
Nke gara aga: Bọọlụ Plastic
Osote: Bọọlụ Nchara Carbon
Bọọlụ Bọọlụ Chrome
Cylindrical ala agba 20x47x14, Cylindrical ala agba 25x52x15, Obere ọla kọpa, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Brass Ball Lelee Valve, Anọ ahịrị Cylindrical ala agba,